Yoolalka 2007 | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 24, 2007 Axad, Juun 27, 2014 Douglas Karr
Waxaan aaminsanahay qorshayaasha waxqabadka. Ma jiro kulan, qorshe mashruuc, ama qorshe horumarineed shaqsiyeed waa inuu dhammaadaa iyadoo aan laga jawaabin 3 su'aalood:
Haddii dadka kale aysan yool ii dejin, markaa waxaan u shaqeeyaa inaan iyaga naftayda u dejiyo. 2007 waxay dareemeysaa inay noqonayso sanad wanaagsan.
Yaa? Me. Goorma? 2007. Waa maxay? Waa kuwan yoolalka aan:
Ka caawi wiilkeyga si kasta oo aan awoodo (inta badan maaliyadeed) sidaa darteed wuxuu ku qalinjabiyaa sharaf wuxuuna ku guuleystey sanadkiisii ​​koowaad ee Jaamacadda Purdue IUPUI. Tallaabada ugu horreysa ayaa jidka ka baxsan - horeyba waa loo aqbalay.
Buuxi buug tikniyoolaji ah oo ku saabsan qorista qoraalka. Markii aan qoray hagaha E-Metrics fudud ee Blogging-ka, runtii waxaan qabtay bug-qorista. Marka waan shaqeynayay Blogging - Sannadka Koowaad, ilaa iyo hada. Farahaaga ha is dhaafto actually Runtii waxaan u diray qabyo qoraal tafatiraha daqiiqado ka hor.
Barnaamij u samee mawduucayga oo ku dhaji barta kale ee SeanRox, Furan Naqshadeynta Bulshada. Kuma faraxsani mawduuca aan hada joogo gebi ahaanba side dhinaca teknolojiyaddu waa weyn tahay, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo dhanka bilicsanaanta ah. Si ku filan uma matalayo waxyaabaha aan isku dayo inaan kuu keeno dadyowga maalin kasta.
Barnaamijka aniga kaligey ah WordPress plugin. Waxaan wax ka badalay a Form Contact plugin si ay u joojiso Spam aan loo baahnayn in yar ka hor… laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ka soo saaro xoqitaanka xoq.
Ka caawi cida aan u shaqeeyo toosinta codsigeena waxa ugu cajiiba SaaS app warshadaha webka waligood ma arkeen ama isticmaaleen. Waxaan soo marnay koritaan iyo guul aan caadi aheyn labadii sano ee la soo dhaafay, laakiin waxaa la joogaa waqtigii aan joojin lahayn jahwareerka isla markaana aan kaga tagnay warshadda boodhka. Hadafkani waa kan i hayaa habeenkii.
Qaab yeelo! Waan ogahay in codadka si aad ah loo gujinayo, laakiin anigu waan daalanahay inta badan oo jimicsi ma sameeyo inta ugu badan ee aan doonayo. Xaqiiqdii, waxaan dib ugu soo laabtay baaskiilkeyga jimicsiga usbuucaan markii ugu horeysay bilo. Shaqadu waxay i dhigtaa badhida maalin kasta iyo baloog garaynta ayaa igu haysa habeenkii. Waa inaan beddelaa caadooyinkayga!
Markaa halkaas adigaa leh… himilooyinkeyga 2007. Maxay yihiin yoolalkaagu? Haddii aadan wax abuurin, fadlan samee oo ku wada wadaag bartaada. Dib u dhig raad-raac ku saabsan soo gelintan adigu si aan dhammaanteen u la kulanno illaa bisha Janaayo ee soo socota oo aan uga wada hadalno sidii aan sameynay.
Tags: 2007douglas karrgoolQoraalka
Jan 24, 2007 saacadu markay ahayd 11:42 PM
Waxaan sameeyay qoraal la mid ah barteyda, maskax weyn ayaa isku fikireysa 😉
Fikrad kale oo aan dhawaanahan la imid ayaa ah inaan midba midka kale la xisaabtamo cawaaqib xumo dhaqaale tusaale ahaan Joe wuxuu ii sheegayaa inuu ku guuleysan doono hadafkiisa ah inuu dib u habeyn ku sameeyo degelkiisa illaa Sabtida soo socota haddii uusan sameynna wuxuu igu leeyahay 20 $.
Waa wax la yaab leh sida ay tani uga caawiso qofka inuu gaaro himilooyinkiisa / himilooyinkeeda. Boostada ayaa halkan taal.